Izindaba - Siyakwamukela Unyaka Omusha WaseShayina !
Siyakwamukela Unyaka Omusha WaseShayina !
Isikhathi seholide saseShayina sonyaka omusha.
Isikhathi sosuku lweholide lonyaka omusha waseShayina sizoqala kusukela ngo-FEB9-17TH 2021, izilokotho ezinhle ezivela e-China BRENU,”GONGXIFA CAI ” unyaka omusha omuhle kubo bonke abangani egameni onyakeni we-OX , ifisela bonke abangani njenge-OX inhlanhla nsuku zonke !
onyakeni omusha, imboni yethu inikeza ukukhushulwa okusha nokukhulu, asijabule futhi sihalalisele imboni yethu evulekile, ukukhushulwa okumangalisayo konyaka omusha, thenga usd10000 mahhala usd10000 kuze kube umhla zingama-31 kuNdasa 2021
Umuntu uzobuza , ngesikhathi se-Covid , kunzima ukuvakashela futhi ahlole imboni , ukuthi kwenziwa kanjani ?Ngesikhathi se-COVID , akulula ukuvakashela noma iyiphi indawo ngokukhethekile oza e-China , kodwa i-inthanethi ingakusiza nonke , sihlinzeka ngombukiso wevidiyo ongu-360°.xoxa nokuxhumana .singasayina inkontileka nge-inthanethi.
Ngemva kokuqedwa kwemishini singazihlanganisa futhi sithathe ividiyo , futhi sikuthumelele , ekugcineni uma usuyitholile ividiyo kuyoba lula ukwazi ukuhlanganisa nokusebenza.
ngo-2021, asibambene ngesandla, siwine siwine ndawonye, ​​​​asisekele ukuthuthukiswa kwebhizinisi lakho usuku nosuku, isinyathelo ngesinyathelo!
Siyifektri, inombolo ethintwayo ingeyejeneretha yesibili yefekthri, ungalokothi uphoxe, uhlala usebenzela phakade, sithembe, 100% ngokweqiniso uyakweseka kuze kube phakade!